Volomaso raitra…araho izao!
Singa iray mety hanova ny fijery sy ny hatsaran’ny tarehy ny volomaso raha voakarakara sy voasoritra tsara. Atoronay anao ireo paipaika mila atao hahazoana antoka fa ho tsara soritra foana ny volomasonao.
Ny fitaovana ilaina
« Pince à épiler » tsara kalitao, izany hoe maranitra tsara ka afaka manala ireo volokely hatrany amin’ny fakany fa tsy manapaka azy.
Mila fihogo kely voatokana ho an’ny volomaso. Mba ho tsara soritra foana lalandava ny volomaso dia tokony hogoina isan’andro, hanaraka ny faniriny ny volomaso, miainga amin’ny fakany.
Ny famaritana azy
Ny soritra tsara indrindra : Volomaso somary matevina eo amin’ny sisiny manakaiky ny orona ary mihamanify any akaikin’ny firihifina no volomaso tsara soritra indrindra.
· Ny fanadiovana azy
Isaky ny hanamboatra ny volomaso ka hanala ireo volo kely mihoatra amin’ilay soritra nosafidiana dia toy izao no atao : tsy maintsy manaraka ny fanirin’ny volo no isintomana ireo volo esorina.
Paipaika : Asiana penisily hazo manaraka ny sisin’ny orona mankany amin’ny sisiny ivelan’ny maso. Eo amin’ilay faritra mifanojo amin’ilay penisily hazo no tokony hiantomboka ny volomaso ka esorina avokoa izay mihoatra izay. Esorina amin’ilay « pince à épiler » avokoa izay volokely mihoatra amin’ny soritr’ilay volomaso ka manavesatra ny fijery. Tsiahivina ihany fa volomaso tsy dia manify sady tsy dia matevina loatra no tsara indrindra.
Fenoina amin’ny « crayon » raha ilaina
Raha somary diso kely ny fihetsika dia azo ahitsy na fenoina amin’ny « crayon » mitovy loko amin’ny volomaso. Rehefa manao azy dia tsy soritana amin’ny tsipika mahitsy akory fa atao toy ny fanirin’ireo volomaso mihitsy koa ny fihetsika.
Ny volomaso ratsy endrika indrindra
Hanimba tanteraka ny hatsaran-tarehy ireto karazana volomaso ireo ka fadio :
Ny volomaso tsy voakarakara fa maniry sy mikorontana
Ny volomaso manify loatra na tsy misy mihitsy
Ny volomaso lasa boribory loatra ny soritra aminy
Ny volomaso havia sy havanana samy manana ny soriny
Ny volomaso matroka be loatra
Ny volomaso milatsaka manakaiky ny maso loatra